BNGRC, ATT, Emmo/Nat, Minisitera: maka fepetra avokoa ny rehetra amin’ny fivahinian’ny papa François | NewsMada
BNGRC, ATT, Emmo/Nat, Minisitera: maka fepetra avokoa ny rehetra amin’ny fivahinian’ny papa François
Samy efa mivonona sy maka ny fepetra rehetra amin’ny handraisana ny papa François ny sampandraharaha samihafa. Ankoatra ny eo anivon’ny mpitandro filaminana (Emmo/Nat), ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny eny anivon’ny diosezy, efa miomana amin’ny famatsiana solika koa ny tompon’andraikitra misahana izany.
Ho feno avokoa ny tobin-tsolika rehetra manoloana ny mety hitomboan’ny filàna satria ho marobe ireo fiara hahetsika. Manomboka any amin’ny faritra izany ka hatreny an-dalana ary koa mandra-piverin’ny mpanao fivahiniana masina. Mandeha koa ny fanaraha-maso ny mety hisehoan’ny varo-maizina amin’ny solika.
Efa nanomboka ny fitsirihana ireo tobim-piantsonana sy ny fanadiovana na koa ny famendrahana fanafody ny eo anivon’ny BNGRC niaraka amin’ny ATT.
Ady amin’ny valanaretina…
Tafiditra amin’ny ady atao amin’ny mety hiparitahan’ny valanaretina, toy ny pesta, sy ny fahatongavan’ny papa François izany. Natomboka tetsy Fasan’ny Karana ny hetsika. Hihazo ny RN7 manomboka eo Antsirabe afakomaly ary hatrany Toliara hatramin’ny 27 aogositra. Ho an’ny RN 1 kosa, hanomboka ny 2 septambra eny Imerintsiatosika hatrany Tsiroanomandidy hatramin’ny 4 septambra. Tanjona amin’izany koa ny tsy hisian’ny lozam-pifamoivoizana. Manampy ireo, efa nentanin’ny fiangonana katolika koa ireo mpitsabo eo aminy samy handray andraikitra, manomboka eny am-piaingana eny anivon’ny diosezy, eny an-dalana sy eny amin’ny paroasy mandray ny mpivahiny mba handray andraikitra amin’ny voina na ny tsy fahasalamana mety hitranga. Tahaka izany koa rehefa eny Soamandrakizay ny asabotsy sy ny alahady amin’ny lamesa hotarihin’ny papa François eny an-toerana.
Tsiahivina fa efa mandeha hatrany ny fanentanana sy ny fampahafantarana amin’ny haino aman-jery amin’ireo haino aman-jery amin’izao hahatongavan’ny vahiny avy any Vatikana izao sy ny avy amin’ny firenen-tsamihafa. Manampy izany ny fivoriana amin’ny sehatra rehetra.